कार्यालय वा घर प्रयोगको लागि एक मनिटर छान्ने, यो असम्भव यो महत्वपूर्ण क्षण ध्यान आकर्षित गर्न नहीं, विकर्ण रूपमा छ। संकल्प, निगरानी म्याट्रिक्स प्रकार, निर्माता, र अन्य विशेषताहरु, पाठ्यक्रम, कुनै कम महत्त्वपूर्ण कुरा, तर हामी यस लेखमा यो सूचक मा निर्माण हुनेछ।
कम्प्युटर बजार, अत्युक्ति बिना विभिन्न प्रकारका र आकार oversaturated प्रदर्शित छ। तसर्थ, साधारण प्रयोगकर्ता कहिलेकाहीं धेरै गाह्रो दायाँ र जानकारी छनौट गर्न छ। मनिटर स्क्रिनको विकर्ण कसरी असर गर्छ अन्य विशेषताहरु devaysa बुझ्न र मोडेल राम्रो तलब ध्यान थियो के छलफल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सुरु गर्न, आजको कम्प्युटर बजार मा मामिलामा स्थिति विचार गर्नुहोस्। अक्सर, उपकरणहरूमा प्रश्न यस प्रकारको जहाँ यो मनिटर द्वारा प्रयोग गरिनेछ को विकल्प (विकर्ण हामी के आवश्यक छ - तल यो थप), एक किनारा प्राप्त गर्दैन। प्रयोगकर्ताहरूको बहुमत को समझ मा एक राम्रो उपकरण बस बहुमुखी हुनुपर्छ: यो संग, तपाईं आफ्नो मनपर्ने टिभी शो र चलचित्र हेर्न, घडी को आसपास काम गर्न सक्छन् राति ढिलो, आराम वेब पृष्ठहरू सर्फ सम्म प्ले, साथै।
यी इच्छा बस अलिकति बुझ्ने हो, तर त्यसपछि किन धेरै बहुमुखी मनिटर भन्दा बजार हामी उपकरणहरू को एक पुरा हिप अन्य प्रत्येक अन्य भन्दा राम्रो हेर्न,? बिक्री वृद्धि गर्न - जवाफ एकदम सरल छ। तपाईं उपकरण र मोडेल को एक ब्रान्ड दर्जनौं, भन्दा एक कम्पनी जसको दायरा तीन उपकरणहरू सीमित छ, पनि धेरै राम्रो हो जो निर्माता देखि नै विकर्ण निगरानी चयन गर्नेछ सहमत हुनुहुन्छ। साथै, वस्तुतः कुनै पनि थप वा कम महत्वपूर्ण ब्रान्ड आफ्नो भविष्य ग्राहक लागि विकल्प को एक भ्रम सिर्जना गर्न averse छ।
तर यो सबै विविधता बस उपकरण र मनिटर स्क्रीन, यसको खण्ड मा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ जो को विकर्ण भनेर गर्न बाध्य छ amidst। कि बारे कसरी सबै यो हिप amidst तिनीहरूलाई फेला पार्न, र हामी यस लेखमा छलफल गरिनेछ। तुरुन्त लायक उल्लेख निगरानी विकर्ण इन्च मा मापन छ। केही निर्माता, आफ्नो पूर्ण बुझ्ने छैन कारण केही सद्गुण द्वारा, खुट्टा, इन्च, वा अरू केहि मा आयाम मापन गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्प्युटर बजार इन्च, साथै हाम्रो लेखको दृढ रहन्छ।
स्क्रिन आकार - यो अर्को एउटा उपकरण भेद मदत कि महत्वपूर्ण विशेषताहरु को एक, र मूल्य ट्याग मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ। सिद्धान्त मा, मनिटर स्क्रिनको विकर्ण सम्भव छ र आँखा मा निर्धारण। सानो devaysa को बहुमत मालिक को समीक्षा द्वारा न्याय छलफल 18.5 इन्च यन्त्र, सामान्य - ", र 30 भन्दा बढी को" 27 - - 19-21,5 "ठूलो - 23-24", विशाल यो क्षेत्र केही छ " वाह! "
विकर्ण निगरानी (आकार)
तरिका सबैलाई कुनै पनि तपाईंको उत्तम विकल्प चयन गर्न सक्षम हुनेछ जहाँ एक अधिक वा कम priglyadnuyu तस्वीर, यी साधारण डाटा व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्नुहोस्। हामी केही विशिष्ट कार्यहरू वा अत्यधिक जटिल प्रदर्शन दाबी छैन, जो कि छ, भण्डारमा किनेको गर्न सकिन्छ पारंपरिक मनिटर, केन्द्रित हुनेछ।
यो आला बजेट वा कार्यालय सकिन्छ। कारण यस्तो उपकरण को कम लागत गर्न साथै जो आफ्नै लागि, मुख्य कारण रुचि गर्ने, साना विकर्ण निगरानी ग्राहकहरु रूपमा (बच्चा र यो जानेछ, म भर्खर यसलाई हेर्न, र यति मा चित्र। पी), संगठन मा बाहिर snapped या बस नगद लागि strapped।
को खुला तथ्याङ्क द्वारा न्याय, लगभग एक सानो थप सबै मनिटर को आधा भन्दा, त्यहाँ बस यस श्रेणी मा हो, यस वर्ष खरिद। यो, को पाठ्यक्रम, खेल, वेबसाइट, भिडियो र एक पीसी अन्य सामग्री सबै निर्माताहरू, त्यसैले सबै भन्दा विकासकर्ताहरूले समूह यसलाई जारी अघि आफ्नो उत्पादन परीक्षण छन् थाहा छ। यस मामला मा उपकरणको सार्वभौमिक प्रकार - यो आईपीएस छ / * VA-प्रदर्शन (विकर्ण 24 ")।
यसलाई आफ्नो nuances संग एकदम होनहार खण्ड छ। तपाईं एक विकर्ण, त्यसपछि एक मानक काम आफ्नो आँखा बाट बारेमा 70 सेमी छ दूरी, एउटा सस्तो मोडेल किन्न भने, तपाईं छविमा व्यक्तिगत पिक्सेल हेर्न सक्नुहुन्छ, र समग्र तस्वीर खस्रो हेर्न हुनेछ। तपाईं स्रोतहरू सीमित छ त भने, यो एक थप समझदार म्याट्रिक्स लिन राम्रो छ, तर एक सानो आकार संग, यो एक गुणवत्ता आईपीएस-प्रदर्शन (विकर्ण 17-24 ") छ।
30 इन्च वा बढी
यो एक धेरै काट मूल्यहरु संग सबैभन्दा भाग विशेष आला लागि हो। 43 इन्च - यो खण्ड मा विकर्ण अधिकतम मनिटर devaysa "ठिक" मा देखेको थियो। यो आकार को उपकरणहरू लोकप्रिय छैनन्, र तिनीहरूलाई कल ठूलो खपत को उत्पादनहरु किनभने उच्च लागत र एक ठूलो चौडाइ को असम्भव छ। त्यो प्रयोगकर्ता को दृश्य को क्षेत्र बाहिर स्थित निगरानी विपरीत किनारा छ, र सबै उपयोगी Gaze devaysa क्षेत्र ढाक्न, यो टाउको घुमाउन आवश्यक छ।
अझ शायद मनिटर हो, म पनि कहाँ धेरै उपकरणहरू स्थापित छन् प्रणाली भन्न सकिन्छ। तिनीहरूले अकाट्य लाभ (उदाहरणका लागि, एउटा ठूलो खेल मा यथार्थवाद) छ, तर यस्तो महंगा सेट सही कार्यका लागि टाढा बस एक राक्षस, एक कम्प्युटर आवश्यक छ। उच्च प्रविधि खडा छैन अझै पनि, र यी प्रणाली को प्रतिस्थापन भर्चुअल चश्मा र भर्चुअल वास्तविकता डाइभ विस्तार अन्य सामान आउँछन्। तैपनि साधारण निगरानी, तिनीहरूले गर्न सक्छन् (कम्तिमा सम्म) विस्थापित।
सबैभन्दा विशेषज्ञहरु तपाईं 24 27 इन्च देखि विकर्ण निगरानी गर्न नजिकबाट हेर्न सुझाव दिन्छौं। तिनीहरू केवल घर र कार्यालय वातावरणमा हाम्रो काम को चासो झल्काउँछ जो, लाभ को एक नम्बर छ।
किन तिमी निगरानी 24-27 "मा रहनु पर्छ:
ठूलो विकर्ण स्क्रिनमा धेरै डाटा उपलब्ध छ र त्यहाँ सक्रियतासाथ स्क्रोलिङ प्रयोग गर्न कुनै आवश्यकता छ;
विशाल वस्तुहरु (नक्सा, जटिल टेबल, रेखाचित्र, आदि) धेरै खराब एउटा सानो स्क्रिनमा भिजुएलाइज्ड छन्;
सबै दृश्य स्क्रिन ठाउँ कब्जा किनभने ठूलो स्क्रिनमा आधुनिक खेल, अझ व्यावहारिक टिप्पणीहरू छ;
आजको मनिटर को "जीवन" को औसत अवधि बारेमा 10-12 वर्ष छ, र एक सस्ती र साना उपकरण खरीद धेरै व्यावहारिक र व्यावहारिकता को मामला मा छैन।
त्यहाँ 24 इन्च वा बढी तन्त्रिका टायर रेटिना र एक विकर्ण उपकरणहरू दृष्टि ( "स्क्याटर आँखा" को प्रभाव) बिगार्छ कि धेरै मिथक छन्। वास्तवमा यो किनभने तपाईं राम्रो चाँडै प्रयोग प्राप्त एक असल र ठूलो पर्दामा, थप केही अनौठो लिजेन्ड भन्दा छ, तर त्यसको विपरीत - यो त्रास कुनै पनि असुविधा छ।
आकार, संकल्प र अनुपात
diagonally यसको संकल्प गर्न मनिटर को सर्वोत्कृष्ट अनुपात पत्ता लगाएर, विशेष कारक को एक नम्बर खातामा लिएको हुनुपर्छ। यस्तो खेल, अनलाइन संसाधन, भिडियो, आदि, मानक अनुपात लागि डिजाइन व्यक्तिगत कम्प्युटर, लागि मिडिया सामग्री अधिकांश, कि 16 छ: 9।
साथै, विकासकर्ता डिजाइन र आफ्नो उत्पादन लागि विभिन्न समाधान, स्पष्ट हुनुपर्छ जसको लागि पूर्ण रकम के, कहाँ र कसरी थाहा।
संकल्प मनिटर र उपाय भिडियो:
HD - 1368 X 768।
पूर्ण HD - 1920 द्वारा 1080 पिक्सेल।
WQ HD - 2560 द्वारा 1440 पिक्सेल।
अल्ट्रा HD - 3840 2160 अंक।
प्रत्येक पाइने विकर्ण यसको अधिकतम चयन गर्नुपर्छ लागि कि, छ स्क्रीन रिजोलुसन। सानो उपकरणहरू (हेर्नुहोस्। धारा "विकर्ण मनिटर") को लागि पर्याप्त HD-अधिशेष विनियोजन प्रणाली, को लागि मध्यम र ठूलो प्रदर्शित को पूर्ण HD न्यूनतम आवश्यकता हो, एक महान र महंगा मोडेल WQ HD संकल्प बिना गर्न सक्नुहुन्न छ।
सुविधाहरू अति-उच्च संकल्प
सामान्य मा, अल्ट्रा HD ढाँचा यसको लागि मिडिया सामग्री धेरै लेखिएको छ, किनभने चाँडै उपभोक्ताहरु लागि सान्दर्भिक हुनेछ। धेरै खरीदारों तिनीहरूले sverhdetalnuyu र अल्ट्रा HD-ढाँचामा विशेष निगरानी को एक प्रत्यक्ष चित्र हो जहाँ पसलहरुमा योग्य मार्केटिङ चाल मा चुम्बन। यो तपाईं को सामने भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ - एक विशेष डिजाइन प्रचार ट्रेलर र दैनिक जीवन (काम वा खेल मा) मा अल्ट्रा-तपाईं यस्तो सामाग्री फेला हुनेछ। तसर्थ, तपाईंले मात्र पूर्ण "अल्ट्रा" -technologies सबै आकर्षण कदर गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ - साथ उच्च स्तरको उपकरण गरेको, फोटो काम गर्न छ।
र बाटो गैर-मानक रिजोल्युसन लागि, द्वारा। बिक्री अझै पनि सम्भव वर्ग5को एक अनुपात संग "पुराना" पूरा गर्नको लागि हो: 4। किनभने यसको विशिष्ट सुविधाहरू, र कम मूल्यहरु को, तिनीहरूले कागजातहरू संग कार्यालय र "शब्द" वा "एक्सेल" को रूपमा पाठ सम्पादक जस्तै काम गर्न धेरै सहज छन्। तर, कारण माथि उल्लेख लागि, तिनीहरूले विश्वव्यापी भनिन्छ गर्न सकिन्छ।
विकर्ण र मकै
अन्न - छविको एकाइ, कि, मनिटर मा सानो डट छ। ठूलो अन्नको, को सजिलो गरिब दृष्टि संग मान्छे को लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जो सानो पाठ, पढ्न: यो एकाइ तस्वीरको गुणस्तर मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव छ। तर, एक ठूलो अनाज को फ्लिप पक्ष - जानकारी बाँकी यो घोर प्रदर्शन। कि, उच्च संकल्प देखिने पिक्सेल को चिल्लो रेखा र फोटो छ।
तल्लो को विघटन, अधिक व्यावहारिक छवि स्क्रिनमा देखिन्छ, तर ठीक मुद्रण पीडित। यो बिन्दु डबल-edged तरवार, मिडिया सामग्री विकासकर्ताहरूले धेरै भनिन्छ हुन सक्छ हुनत कि, सही असल अन्न मा सबै जानकारी प्रदर्शन छ, एक ब्यालेन्स फेला पार्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ काम गर्न ठीक-अन्न मनिटर बेचैनी गराउँछ छ तर हाम्रो दैनिक जीवनमा अझै पनि कार्यक्रम को एक पर्याप्त संख्या रहनेछ।
स्क्रिनको विकर्ण मा अधिकतम अन्न:
0,27-0,30 18,5-20 मिमी इन्च;
लागि 0,24-0,25 मिमी 21-22 इन्च ;
23 इन्च लागि 0,265 मिमी;
24 इन्च लागि 0,27-0,28 मिमी;
27-28 इन्च लागि 0,31-0,32 मिमी;
को "अति" एलसीडी मनिटर लागि 0,14-0,18 मिमी।
धेरै विशेषज्ञहरु, खरीदारों संग विश्वास छ कि विकर्ण अन्न को सर्वोत्कृष्ट अनुपात र मनिटर को लागत - पूर्ण HD-अधिशेष विनियोजन प्रतिनिधिको संग 24 इन्च उपकरणहरू। तपाईं चस्मा लगाउनु वा अन्य दृष्टि समस्या छ भने, तपाईं आँखा मा एक दुखाइ प्रणाली फन्टहरू वा अन्य साना भागहरु सामग्री हेर्न हुन छ किनभने, साना र पनि मध्यम आकारको अन्न उपकरणहरू त्यसपछि किन्न छैन। निस्सन्देह, तपाईं एक ठूलो प्रदर्शन मात्रा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि निकै कुरकुरा तस्वीर ग्रस्त र यसको अनुपात विकृत।
एक मनिटर को दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधा विकर्ण म्याट्रिक्स पछि सकिन्छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प छान्ने को जटिलता जो एक दर्जन भन्दा बढी संचित छ matrices को प्रकार को एक किसिम, अझै यसो भन्छन्: .. तमिलनाडु, आईपीएस, Pls, एमवीए, PVA, आदि अनि प्रत्येक प्रकार केही विशिष्ट विशेषताहरु र उल्लेखनीय गुणहरू छन्।
तपाईं यो सम्पूर्ण दायरा सरल बनाउन प्रयास भने, हामी निम्न तस्वीर प्राप्त। तमिलनाडु-अधिशेष विनियोजन, सस्ता र तेज, तर गरिब हेर्ने कोण र रंग प्रजनन mediocre संग। आईपीएस-म्याट्रिक्स संग मोडेल सबैभन्दा सहज हेर्ने कोण, रंग को गहिरो दायरा, तर एक उच्च मूल्य ट्याग र सम्हाल्नुभएको प्रतिबिम्ब हो। MVA- र PVA-अधिशेष विनियोजन सर्वश्रेष्ठ कालो र सेतो को गहिराई व्यक्त, तर त्यहाँ टन र रंग ब्यालेन्स दृश्य को कोण मा एक मामूली परिवर्तन संग केही कठिनाइ छन्।
द्वारा र ठूलो छ, हामी कम्प्युटर बजार मा हेर्न सबै कि विविधता संग, आदर्श म्याट्रिक्स अवस्थित छैन: प्रत्येक मलम यसको आफ्नै फ्लाई, साथै यसको लाभ छ।
के अध्ययन र आदर्श प्रकार matrix को विकल्प मा काट प्राप्त छैन। मुख्य ध्यान हेर्ने कोण, अधिकतम विपरीत र चमक र रङ्ग संतृप्ति मा विकर्ण स्क्रिन लागि बाहेक, भुक्तानी गर्नुपर्छ। यी सबै मापदण्डहरु सामान्यतया पसलमा को काउन्टर मा मूल्य सूची फेला बक्समा वा उपकरणमा ठूलो मुद्रण निर्दिष्ट छन्।
आधारभूत सबै आधुनिक मनिटर को "रोग" - यो पर्याप्त हेर्ने कोण, अर्थात् घुमाउँदा वा स्क्रिनमा tilting गरेर छविको विकृति हो। यो ठूलो स्क्रीन र तमिलनाडु-matrices काम उपकरणहरू लागि विशेष गरी महत्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीं, पनि जब स्क्रिनमा एक सही कोण मा हेर्न, को कुना मा तस्वीर zamylenny, जो सस्ता मोडेल लागि विशिष्ट छ जस्तो देखिन्छ। तपाईं यस्तो बेचैनी आफूलाई सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो हेर्नका छैन तल्लो 160 भन्दा डिग्री ठाडो कोण र 170 तेर्सो उपकरणहरू मा रहन राम्रो छ।
खरीद गर्दा खोज्न आवश्यक छ कि प्रोसेसर को मुख्य विशेषताहरु
के VPN र यसको सुविधाहरू छन्
एनिमेटर Fedor Khitruk
आफ्नै हातमा धातु को Mangals - हरेक घरमा एक स्वादिष्ट बारबेक्यू